Uyifaka njani iClockworkMod Ukubuyisela kwi-Samsung Galaxy S | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Ukubuyiselwa kwe-Android, Samsung, Tutorials
Kwisifundo esilandelayo ndiza kukwazisa ngenye indlela ingcambu kwaye ufake ukubuyiswa iguqulwe kwifayile ye- Samsung Galaxy S, umzekelo GT-I9000, ngaphandle kokusebenzisa iOdin yeWindows.
Mna ngokobuqu ndikhetha ubuchule bokukhanyisa ngokuthe ngqo I-firmware ye-Stock JVU kunye neCFRoot yayo, kodwa baninzi abantu abangathandiyo okanye aboyikayo, kubo bonke aba bahlohli be uyifaka njani iClockworkMod Recovery akukho mfuneko yeOdin.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukufumana umsebenzi wokufaka i-Recovery eguqulweyo kwisiphelo sethu se-Android, iya kuba kukuncothula isixhobo usebenzisa enye yezi ndlela zimbini:
1 Ukuqulunqa i-Z4root
2 Ukuqulunqa i-SuperOneClick
3 Uyifaka njani iClockworkMod Recovery
Le ndlela ye Ukubamba okungapheliyo kulula njengokuba Khuphela usetyenziso lweZ4root, yifake kwifayile yethu ISamsug Galaxy S, yisebenzise kwaye ulandele imiyalelo, imiyalelo enqunyelwe kunqakrazo kwiqhosha.
Kule ndlela ye luzimisele Ikhompyuter yakho ene-operating system iya kufuneka Windows, khuphela le nkqubo ilandelayo kwaye landela imiyalelo kwisithuba esiqhotyoshelweyo; ukulandela onke amanyathelo nokwenza izinto njengoko kuchaziwe, ngaphantsi kwe- imizuzu emibini Siza kuba nesixhobo sethu.
Uyifaka njani iClockworkMod Recovery
Eli lelona nyathelo lilula kuzo zonke, ukufezekisa, nje ukuba Samsung Galaxy S, Kuya kufuneka sithobise Umphathi weRom, enye isicelo samahhala esinokuyifumana kwiVenkile yokudlala.
Nje ukuba ifakwe, siya kuvula usetyenziso kwaye ukhethe Inketho yokuqala kuko konke ukufakela ukubuyiswa kweClockworkMod, siya kukhetha isixhobo, esi imeko eyi Samsung Galaxy S kwaye ulinde isicelo ukuba usifakele sona.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo, Ukubuyisela kwakhonaX, faka ngokulula ukubuyisela kwakhona kwiziphelo zeXperia, Qalisa isigxina sakho kunye neZ4root, Ungayisusa njani i-terminal yakho ye-Android ngeSuperOneClick
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, enye indlela yokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod
faka umphathi we-rom kwaye ayisebenzi….
Ivenkile yokudlala iRom ayihambelani neGPS I9000T. Ayisiyiyo le ndiyithethayo, kodwa sisicelo ngokwaso.
Ndiyikhuphele kwaye indixelela ukuba ifuna ukuhlaziywa
Ndicinga ukuba i-Galaxy S GT-I9000 iyahambelana. Lowo akahambelaniyo ngokuqinisekileyo ngowam, iGalasy S Plus. Usizi…
iyasebenza kwi-galaxy s duos 4.0.4?
ClipSync, ungqamaniso lwesicelo se-Android
Isicelo esisemthethweni seNASA kwi-Android yakho